I-Brandnew i-iPhone 4S 1430mAh yokufaka ibhethri nge-500 Cycle Life Time
Incazelo:I-iPhone 4S Ibhethri,iPhone battery,I-iPhone 4S Ukuphila kwebhethri,I-iPhone 4S Ibhethri Pack,,
Home > Imikhiqizo > I-iPhone Battery > I-iPhone 4S Ibhethri
Ukufakela ibhethri ye-smartphone
Ingabe ibhethri yakho idla ngokushesha? Ingabe iphesenti lakho lebhetri liyanqamuka?
Lezi zibonakaliso zebhethri eligqamile. Wonke amabhethri e-lithium, uhlobo lwebhethri lwanamuhla lwe-elekthronikhi, ukuphelelwa isikhathi kanye nokusetshenziswa. Ukudonsa emandleni kungavamile ukuqaphela emva kwezinyanga eziyisithupha. Ngemuva kwezinyanga ezingu-12 (~ ~ 300 izindleko zokuhamba), kuvamile ukuthi ibhethri ilahlekelwe ngu-10-30% wemandla wayo okuqala. Ekugcineni, ibhethri izohluleka ukugcina ifoni isebenza isitebe futhi ifoni ingavimba ukusetshenziswa noma imodi yokulinda.
Brandnew 0 I-Cycle iPhone 4S I-Battery Li-ion  Xhumana Nanje
Ukufaka iBhetri ye-iPhone 4S i-CDMA ne-GSM  Xhumana Nanje
I-iPhone 4S Ibhethri esikhundleni se-lithium-ion Ibhetri  Xhumana Nanje
Brandnew 0 I-Cycle iPhone 4S I-Battery Li-ion
I-Brandnew 0 I-Cycle iPhone 4S I-Battery Replacement Li-ion Egcina Ibhethri I-iPhone 4S 1430mAh 4.2V 5.2whr Ingabe i-iPhone yakho 4S Li-ion ibhethri idlidliza ngokushesha? Ingabe i-iPhone 4S Li-ion yephesenti yebhethri igxuma? Lezi zibonakaliso...
Ukufaka iBhetri ye-iPhone 4S i-CDMA ne-GSM
Ukufaka ibhetri ye-iPhone 4S - Iyahambisana nama-A1387 CDMA & GSM Amamodeli I-iPhone 4S 1430mAh 4.2V 5.2whr Ingabe ukhathazeke ngebhethri yebhethri ye-iPhone ngaphandle kwenkokhelo 1 isikhathi nsuku zonke? Kuyinto ecacile ye-1-2 iminyaka...
I-Brandnew ye-iPhone 4S Ibhethri esikhundleni se-lithium-ion Ibhetri ekuphumeni kweBettery Life 1.5 Iminyaka I-iPhone 4S 1430mAh 4.2V 5.2whr Lona i-iPhone 4S Lithium-ion Ukushintshwa kwebhethri okungashintsha kalula ibhethri efonini yakho. Unayo...
I-China I-iPhone 4S Ibhethri Abahlinzeki
I-iPhone 4S Ibhethri 3.7V Li-ion nge-500 umjikelezo wokuphila komjikelezo okwenziwa kusuka ebhenini le-brandnew nebhodi eliphezulu lokuvikelwa kwekhwalithi kanye ne-FPC, zonke izinto ezibonakalayo zenziwe ngezifiso. Umjikelezo we- iPhone ne- iPhone 4S ukuphila kwebhethri izikhathi ezingaphezu kuka-500, izinga lokulahlwa ngaphansi kuka-3 ‰. Singumkhiqizi ochwepheshe kwi- iPhone Battery .
I-iPhone 4S Ibhethri Pack
Amandla amandla: 3.7V
Umthamo wezindleko ezilinganiselwe: 4.2V
Amandla: 1430mAh (5.3whr)
Usayizi weselula: 42x32x82mm
I-iPhone 4S Ibhethri iPhone battery I-iPhone 4S Ukuphila kwebhethri I-iPhone 4S Ibhethri Pack IPhone 4S Ibhethri